UYISUSA NJANI IMIBUTHO YONXIBELELWANO LWEFAYILE NGAPHAKATHI WINDOWS 10 - ITHAMBILE
Uyisusa njani imibutho yoNxibelelwano lweFayile ngaphakathi Windows 10
Uyisusa njani imibutho yoNxibelelwano lweFayile Windows 10: Unxulumano lweFayile lunxulumanisa ifayile kunye nesicelo esinokuvula loo fayile ethile. Umsebenzi woMbutho woHlobo lweFayile kukunxulumanisa udidi lwefayile kunye nesicelo esihambelanayo, umzekelo, zonke iifayile ze.txt zivulwa ngomhleli wokubhaliweyo oqhele ukuba nonotepad. Ke kule, zonke iifayile zivulwe ngesicelo esihambelanayo esingagqibekanga esikwaziyo ukuvula ifayile.
Ngamanye amaxesha udibaniso lwefayile lusonakala kwaye akukho ndlela yokususa imibutho yoHlobo lweFayile kwiWindows, kulo mzekelo, yithi ifayile .txt iya kuvulwa ngesiphequluli sewebhu okanye i-Excel kwaye yingakho kubaluleke kakhulu ukususa imibutho yohlobo lwefayile. Ke ngaphandle kokuchitha naliphi na ixesha makhe sibone ukuba singawulungisa njani lo mba ngala manyathelo angezantsi okusombulula ingxaki.
Indlela yoku-1: Seta ngokutsha lonke uhlobo lwefayile kunye nonxulumano lweprothokholi kwizinto ezingagqibekanga zikaMicrosoft
Inketho yesi-2: Buyisela iMibutho yoNxibelelwano lweFayile usebenzisa i-DISM Tool
Inketho yesi-3: Registry Fix yokususa iFayile Association
Ukhetho lwesi-4: Susa iFayile Association kwi-app ethile ngesandla
Ukhetho lwesi-5: Susa iMidibaniso yeeFayile kunye nesixhobo somntu wesithathu onganxulumanisi neentlobo zeeFayile
1. Cofa iSitshixo seWindows + I ukuvula iiSetingi uze ucofe Inkqubo.
2. Emva koko kwipheyini yefestile esekhohlo khetha Usetyenziso oluhlala lukhona.
3. Cofa apha Lungisa kwakhona phantsi Phinda umisele izindululo zeMicrosoft.
4. Kungoko ubeke ngokutsha zonke iintlobo zonxulumano lwefayile kuMicrosoft engagqibekanga.
Phawula: Yiya kwikhompyuter esebenzayo kwaye uqhube umyalelo wokuThumela ngaphandle kuqala emva koko ubuyele kwiPC yakho emva koko uqhube umyalelo wokungeniswa ngaphandle.
2. Chwetheza lo myalelo ulandelayo kwi-cmd kwaye ucofe u-Enter:
Qaphela: Oku kuya kudala i DefaultAppAssociations.xml ifayile kwi desktop yakho.
3. Yiya kwi-desktop yakho kwaye ukhuphele ifayile kwi-USB.
4. Okulandelayo, yiya kwiPC apho unxulumano lwefayile ludityanisiwe kwaye ukhuphele ifayile kwidesktop yakho (oku kubalulekile ukuba lo myalelo ungezantsi usebenze).
5. Ngoku buyisela unxulumano lwefayile yoqobo kwiPC yakho ngokuchwetheza lo myalelo:
Phawula: Ukuba uyinike igama ngokutsha i DefaultAppAssociations.xml ifayile okanye ukhuphele ifayile kwenye indawo kune desktop yakho emva koko kufuneka utshintshe umyalelo obomvu kwindlela entsha okanye igama elitsha olikhethele ifayile.
dism / intanethi / Import-DefaultAppAssociations: I-%UserProfile%DesktopMyDefaultAppAssociations.xml
Phawula: Buyisela lo mendo ungentla (C:UMENDOTOFILE.xml) ngendawo yefayile oyikopayo.
4. Qalisa kwakhona iPC yakho kwaye unokuba neMibutho yoBuyiselo lweFayile kwiPC yakho.
1. Cofa i-Windows Key + R uze uchwetheze regedit kwaye ucofe u-Enter ukuvula iRegistry Editor.
2. Yiya kweli qhosha lilandelayo lobhaliso:
3. Ngoku fumana ulwandiso lwefayile ofuna ukususa unxulumano kwiqhosha elingentla.
4. Wakuba ulufumene ulwandiso ngoko cofa ekunene kwaye ukhethe cima. Oku kuyakucima udibaniso lwefayile olungagqibekanga lwenkqubo. Umzekelo: ukuba ufuna ukucima unxulumano lwefayile olungagqibekanga lwe .jpeg'ulungelelanisa okubhaliweyo: thethelela;'>5. Ukuze apha ngasentla kusebenze ukuqala kwakhona iPC yakho okanye qalisa kwakhona i-explorer.exe yakho
6. Ukuba awukakwazi ukususa unxulumano lweefayile ngoko kufuneka ucime kwa elo qhosha lifanayo HKEY_CLASSES_ROOT.
Emva kokuba uyenzile loo nto uya kukwazi ukuphumelela Susa iMibutho yoHlobo lweFayile kwifayile ethile kodwa kukho ezinye iinketho ukuba awufuni ukungcolisa ngobhaliso.
1. Vula i-Notepad kunye Cofa iFayile> Gcina njenge.
2. Chwetheza igama ngolwandiso .xyz umzekelo, Aditya.xyz
3. Khetha indawo oyifunayo apho ufuna ukugcina khona ifayile.
4. Okulandelayo, khetha Zonke iifayile phantsi Gcina njengohlobo kwaye emva koko ucofe Gcina.
5. Ngoku nqakraza-ekunene ifayile yakho (ohlobo lwefayile yonxulumano ofuna ukuyisusa) kwaye ukhethe Vula nge emva koko ucofe ku Khetha olunye usetyenziso.
6. Ngoku khangela Soloko usebenzisa le app ukuvula iifayile ze-.txt uze ukhethe Khangela enye app kule PC.
7. Khetha Zonke iifayile ezivela ezantsi ekunene ukuhla-phantsi kwaye ujonge kwifayile oyigcine ngasentla (Aditya.xyz kulo mzekelo) kwaye ukhethe loo fayile kwaye ucofe Vula.
8. Ukuba uya kuzama ukuvula ifayile yakho uya kujongana nempazamo Le app ayikwazi ukusebenza kwiPC yakho, akukho ngxaki yiya kwinyathelo elilandelayo.
9. Nje ukuba unxulumano lohlobo lweFayile luqinisekisiwe cima nje ifayile oyenzileyo ngasentla (Aditya.xyz). Ngoku iya kunyanzela i .png'ukulungelelanisa-okubhaliweyo: thethelela;'>10. Ukuba awufuni ukukhetha usetyenziso ngalo lonke ixesha uvula ifayile emva koko cofa ekunene uze ukhethe Vula nge kwaye ucofe Khetha olunye usetyenziso.
11. Ngoku khangela Soloko usebenzisa le app ukuvula iifayile ze-.txt uze ukhethe usetyenziso ofuna ukuvula ngalo ifayile.
10. Qalisa kwakhona iPC yakho ukugcina utshintsho.
1. Khuphela isixhobo unassoc_1_4.zip.
2. Okulandelayo ekunene cofa kwi zip kwaye ukhethe khupha apha.
3. Cofa ekunene kwi unassoc.exe uze ukhethe Baleka njengoMlawuli.
4. Ngoku khetha uhlobo lwefayile kuluhlu kwaye ucofe Susa unxulumano lwefayile (Umsebenzisi).
5. Nje ukuba unxulumano lohlobo lweFayile lususiwe kufuneka uphinde unxulumanise ifayile ekulula, xa uphinde uvule i-app iya kukucela ngokukhetha ukukhetha inkqubo yokuvula ifayile ngayo.
6. Ngoku i Cima iqhosha liyanceda ukuba ufuna ukucima ngokupheleleyo unxulumano lohlobo lwefayile kubhaliso. Zombini umsebenzisi-specific kunye nehlabathi jikelele lohlobo lwefayile ekhethiweyo iyasuswa.
7. Qala kabusha iPC ukugcina utshintsho kwaye oku kuya kuphumelela Susa iMibutho yoHlobo lweFayile.
Lungisa Useto lwakho lwangoku lokhuseleko aluvumeli le fayile ukuba ikhutshelwe
Lungisa iFirewall yeWindows ayinakutshintsha ezinye zeempazamo zakho zoSeto 0x80070424
Ingxaki yoQhagamshelwano lweWiFi olulinganiselweyo
Lungisa impazamo yoHlaziyo lweWindows 0x8024a000
Yiloo nto oyifundileyo ngempumelelo Uyisusa njani imibutho yoNxibelelwano lweFayile ngaphakathi Windows 10 ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sithuba uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lezimvo.